Stent – DVB
နှလုံးသှေးကွောကဉျြးကုသမှုတဈခုဖွဈတဲ့ Stent ( စတနျ့)ထညျ့တယျဆိုတာဘာလဲ
ငယျငယျရှယျရှယျတုနျးက စားခငျြတာတှေ မဆငျမခွငျစားခဲ့ကွတာကတဈကွောငျး လေ့ကငျြ့ခနျးမလုပျခဲ့တာကွတဈကွောငျး နှလုံးကနျြးမာအောငျ မထိနျးခဲ့မိတာကတဈကွောငျးအသကျကွီးလာတော့ ဝလာတာကတဈကွောငျးနဲ့ နှလုံးသှေးကွောကဉျြးတဲပွဿာတှေ အဖွဈမြားလာတာ အားလုံးသိကွမှာပါ။ နှလုံးသှေးကွောဆိုတာကလညျး အရေးကွီးတယျမလား။ ကဉျြးရာကနေ နောကျပိုငျး နှလုံးသှေးကွောပိတျသှားတာမြိုးကနေ အသကျဆုံးတဲ့အထိ ဖွဈသှားတတျတယျလေ။
ကဉျြးနတေဲ့နှလုံးသှေးကွောကွောငျ့ လှုပျလှုပျရှားရှားလုပျလိုကျတိုငျး မောလို့ ဆေးခနျးသှားပွတဲ့အခါ နှလုံးသှေးကွောကဉျြးနပွေီလို့ အဖွထှေကျတာနဲ့ ဆရာဝနျက Stent ထညျ့ပွီး နှလုံးသှေးကွောပနျခြဲ့ဖို့လိုကွောငျး ပွောပါလိမျ့မယျ။ ဒီတော့ Stent ဆိုတာဘာလဲ၊ သူက ဘယျလိုကောငျးကြိုးတှေ ရှိလို့လဲဆိုတဲ့အကွောငျး ဒီဆောငျးပါးထဲမှာ ပွောပွပေးမှာပါ။
Stent ဆိုတာ သတ်တု( ဒါမှမဟုတျ) ပလတျစတဈနဲ့လုပျထားတဲ့ သေးငယျတဲ့ ပိုကျလေးတဈခြောငျးပါ။ ပိတျနတေဲ့ သှေးကွောတှေ ပွနျပှငျ့ဖို့၊ ကဉျြးနတေဲ့ သှေးကွောတှေ ပွနျကယျြစဖေို့ ဒီ Stent လေးထညျ့ပွီး ပုံမှနျသှေးလညျပတျမှု ရအောငျလုပျလို့ရပါတယျ။ သှေးကွောကွီးတှအေတှကျတော့ specialized fabric နဲ့ပွုလုပျထားတဲ့ Stent-grafts တှေ ထညျ့ရပါတယျ။
သှေးတှငျးအဆီဓာတျမြားပွီး ပုံလာတဲ့ အဆီပွငျတှကွေောငျ့ သှေးကွောကဉျြးသှားတဲ့လူတှေ
အရေးပျေါ အခွအေနဖွေဈတဲ့နှလုံးသှေးကွောပိတျသှားတဲ့ လူနာတှဆေို ခကျြခငျြးအရေးပျေါ stent ထညျ့ရတတျပါတယျ။
Aortic Aneurysm ( နှလုံးပငျမသှေးကွောဖောငျးခွငျး) brain Aneurysm ( ဦးနှောကျသှေးကွောဖောငျးခွငျး) စတဲ့ သှေးကွောဖောငျးတှေ မပေါကျအောငျ ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။
သညျးခွလေမျးကွောငျးပိတျသှားတာ၊ လပွှေနျကဉျြးနတောနဲ့ ဆီးလမျးကွောငျးပိတျသှားတာ စတဲ့ ပွဿနာတှမှောလညျး stent ထညျ့ပွီး ပုံမှနျလမျးကွောငျးပွနျရအောငျ လုပျလို့ရပါသေးတယျ။
စှဲသောကျနတေဲ့ ဆေးတှေ အကွောငျး ဆရာဝနျကို သခြောပွောပွပါ။
သှေးကြဲစေတဲ့ ဆေးတှဖွေဈတဲ့ aspirin, clopidogrel, ibuprofen, နဲ့ naproxen တို့ကို လုံးဝမသောကျပါနဲ့။ ဆရာဝနျနဲ့ သခြောတိုငျပငျပါ။
ပေါငျကွား( ဒါမှမဟုတျ) လကျမောငျးအတှငျး တဈနရောမှာ ခှဲစိတျရာသေးသေးလေးပေးပွီး ကငျမရာတပျဆငျထားတဲ့ catheter ကနတေဈဆငျ့ လိုခငျြတဲ့နရောရောကျအောငျ Stent ကို ထညျ့လရှေိ့ပါတယျ။ ဒီလိုထညျ့နခြေိနျ သှေးကွောတှကေို ပိုပွီးမွငျသာစဖေို့အတှကျ ဆရာဝနျကနေ angiogram လို့ချေါတဲ့ သှေးကွောတှငျးဆေးရညျထိုးသှငျးပုံရိပျဖျောခွငျးနညျးပညာကို သုံးမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီလို နညျးပညာတှကေိုသုံးပွီး ပကျြစီးနတေဲ့သှေးကွောနရောကို သိမယျ၊ အဲဒီနရောရောကျအောငျ stent ထညျ့ပွီး ပွုပွငျပေးမယျ၊ ပွီးရငျ stent ကလှဲပွီး ကနျြတာတှအေားလုံးကို ပွနျထုတျ၊ ခှဲစိတျရာကို ပွနျခြုပျမှာ ဖွဈပါတယျ။
သှေးကွောတှကေို ပုံရိပျဖျောတဲ့နရောမှာသုံးတဲ့ ဆေးရညျတှနေဲ့ ဓာတျမတညျ့တာ
မဆေ့ေးပေးခှဲစိတျရတာဖွဈတာကွောငျ့ မဆေ့ေးရဲ့ နောကျဆကျတှဲ ဆိုးကြိုးတှေ
သှေးကွောကို ခှဲစိတျရာမှာဖွဈတာကွောငျ့ သှေးထှကျလှနျတဲ့ပွဿနာတှေ
Stent က အခွားသှေးကွောတဈခုအပျေါ သှားပိမိပွီး သှေးကွောပိတျသှားနိုငျတာတှေ
အသဈဝငျလာတဲ့ stent ကို ခုခံအားက ပွနျတိုကျလို့ သှေးကွောတှေ ရောငျပွီး ကဉျြးလာတာမြိုးတှေ
လပွှေနျထဲ stent ထညျ့တဲ့ ကိစ်စတှမှောဆို အသကျရှူရခကျတာတှေ
ကြောကျကပျထဲ stent ထညျ့တဲ့ပွဿနာတှမှောဆို ကြောကျတညျတာမြိုးတှေ ဖွဈတတျပါတယျ။
ခှဲထားတဲ့ အရာလေးကနေ နာကငျြမှု အနညျးငယျခံစားရမယျ။ အဲဒီအတှကျ ဆရာဝနျတှကေ ဆေးပေးမှာ ဖွဈပါတယျ။
သှေးခဲတာမြိုးတှေ မဖွဈအောငျလို့ သှေးကြဲဆေးတှလေညျး သောကျရပါလိမျ့မယျ။
နှလုံးသှေးကွောပိတျတာ လဖွေတျတာမြိုးတှေ ကွောငျ့ stent ထညျ့ရရငျတော့ စိတျခရြအောငျ ဆေးရုံမှာ ရကျအနညျးငယျနဖေို့ လိုပါလိမျ့မယျ။
နောကျပွီး သှေးကွောကဉျြးတာ သှေးတှငျးအဆီမြားတာမြိုးတှေ ထပျမဖွဈအောငျလို့ ကိုယျ့ရဲ့ နထေိုငျစားသောကျမှု ပုံစံတှကေို ပွောငျးလဲဖို့လိုအပျပါလိမျ့မယျ ။ ။
ရေးသားသူ Dr. Thin Yadanar @ Frances ဆေးပညာပိုငျးဆိုငျရာတညျးဖွတျသူ Dr. Thurein Hlaing Win ဤဆောငျးပါးကို DVB ၏ မိတျဘကျ ကနျြးမာရေးနှငျ့ ဆေးပညာဝကျဘျဆိုဒျ hellosayarwon.com မှ ကူးယူဖျောပွပါသညျ။ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Zawgyi_version
နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းကုသမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Stent ( စတန့်)ထည့်တယ်ဆိုတာဘာလဲ
ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်တုန်းက စားချင်တာတွေ မဆင်မခြင်စားခဲ့ကြတာကတစ်ကြောင်း လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခဲ့တာကြတစ်ကြောင်း နှလုံးကျန်းမာအောင် မထိန်းခဲ့မိတာကတစ်ကြောင်းအသက်ကြီးလာတော့ ဝလာတာကတစ်ကြောင်းနဲ့ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းတဲပြဿာတွေ အဖြစ်များလာတာ အားလုံးသိကြမှာပါ။ နှလုံးသွေးကြောဆိုတာကလည်း အရေးကြီးတယ်မလား။ ကျဉ်းရာကနေ နောက်ပိုင်း နှလုံးသွေးကြောပိတ်သွားတာမျိုးကနေ အသက်ဆုံးတဲ့အထိ ဖြစ်သွားတတ်တယ်လေ။ ကျဉ်းနေတဲ့နှလုံးသွေးကြောကြောင့် လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလုပ်လိုက်တိုင်း မောလို့ ဆေးခန်းသွားပြတဲ့အခါ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းနေပြီလို့ အဖြေထွက်တာနဲ့ ဆရာဝန်က Stent ထည့်ပြီး နှလုံးသွေးကြောပြန်ချဲ့ဖို့လိုကြောင်း ပြောပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ Stent ဆိုတာဘာလဲ၊ သူက ဘယ်လိုကောင်းကျိုးတွေ ရှိလို့လဲဆိုတဲ့အကြောင်း ဒီဆောင်းပါးထဲမှာ ပြောပြပေးမှာပါ။
Stent ဆိုတာ သတ္တု( ဒါမှမဟုတ်) ပလတ်စတစ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ သေးငယ်တဲ့ ပိုက်လေးတစ်ချောင်းပါ။ ပိတ်နေတဲ့ သွေးကြောတွေ ပြန်ပွင့်ဖို့၊ ကျဉ်းနေတဲ့ သွေးကြောတွေ ပြန်ကျယ်စေဖို့ ဒီ Stent လေးထည့်ပြီး ပုံမှန်သွေးလည်ပတ်မှု ရအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်။ သွေးကြောကြီးတွေအတွက်တော့ specialized fabric နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ Stent-grafts တွေ ထည့်ရပါတယ်။
ဘယ်လိုလူတွေက stent ထည့်ဖို့ လိုအပ်သလဲ။
သွေးတွင်းအဆီဓာတ်များပြီး ပုံလာတဲ့ အဆီပြင်တွေကြောင့် သွေးကြောကျဉ်းသွားတဲ့လူတွေ
အရေးပေါ် အခြေအနေဖြစ်တဲ့ နှလုံးသွေးကြောပိတ်သွားတဲ့ လူနာတွေဆို ချက်ချင်းအရေးပေါ် stent ထည့်ရတတ်ပါတယ်။
Stent ထည့်တာက နှလုံးသွေးကြောမပိတ်အောင် တစ်ခုတည်းအတွက် သုံးလို့ရတာလား။
နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းတာ ပိတ်တာအတွက် stent ထည့်ပြီးကုသတာအပြင် stent က
Aortic Aneurysm ( နှလုံးပင်မသွေးကြောဖောင်းခြင်း) brain Aneurysm ( ဦးနှောက်သွေးကြောဖောင်းခြင်း) စတဲ့ သွေးကြောဖောင်းတွေ မပေါက်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
သည်းခြေလမ်းကြောင်းပိတ်သွားတာ၊ လေပြွန်ကျဉ်းနေတာနဲ့ ဆီးလမ်းကြောင်းပိတ်သွားတာ စတဲ့ ပြဿနာတွေမှာလည်း stent ထည့်ပြီး ပုံမှန်လမ်းကြောင်းပြန်ရအောင် လုပ်လို့ရပါသေးတယ်။
နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းနေလို့ Stent ထည့်ကုသမှု ခံယူတော့မယ်ဆိုရင် လူနာတွေဘက်က ဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်လဲ။
ဒီလို ပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာ ကိုယ်ဘယ်နေရာမှာ stent ထည့်မှာလဲ ဘယ်သွေးကြောအတွက် ဘယ်လမ်းကြော်ငးအတ်ွက ထည့်မှာလဲဆိုတာပေါ် မူတည်ပြီး ကွဲပြားမှုတွေ ရှိပါတယ်။ Stent ကို များသောအားဖြင့် သွေးကြောတွေ အတွက်ပဲ သုံးကြတာဆိုတော့ သွေးကြောတွေထဲ stent မထည့်ခင် လူနာဘက်က ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတဲ့အချက်လေးတွေ အကြောင်းပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
စွဲသောက်နေတဲ့ ဆေးတွေ အကြောင်း ဆရာဝန်ကို သေချာပြောပြပါ။
သွေးကျဲစေတဲ့ ဆေးတွေဖြစ်တဲ့ aspirin, clopidogrel, ibuprofen, နဲ့ naproxen တို့ကို လုံးဝမသောက်ပါနဲ့။ ဆရာဝန်နဲ့ သေချာတိုင်ပင်ပါ။
နှလုံးသွေးကြောထဲ ပိုက်ထည့်ရမယ်ဆိုတော့ ခွဲစိတ်မှု အကြီကြီးလုပ်ရမှာပဲလို့ ထင်နေကြတဲ့သူတွေ ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ Stent ထည့်ပြီး နှလုံးသွေးကြောချဲ့တဲ့ ခွဲစိတ်မှုဟာ ခွဲစိတ်ရာ အကြီးကြီးမလိုဘဲ သေးသေးလေးနဲ့တင်ပြီးသွားတဲ့ ခွဲစိတ်မှု တစ်ခုပါ။ ပေါင်ကြား( ဒါမှမဟုတ်) လက်မောင်းအတွင်း တစ်နေရာမှာ ခွဲစိတ်ရာသေးသေးလေးပေးပြီး ကင်မရာတပ်ဆင်ထားတဲ့ catheter ကနေတစ်ဆင့် လိုချင်တဲ့နေရာရောက်အောင် Stent ကို ထည့်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီလိုထည့်နေချိန် သွေးကြောတွေကို ပိုပြီးမြင်သာစေဖို့အတွက် ဆရာဝန်ကနေ angiogram လို့ခေါ်တဲ့ သွေးကြောတွင်းဆေးရည်ထိုးသွင်းပုံရိပ်ဖော်ခြင်းနည်းပညာကို သုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို နည်းပညာတွေကိုသုံးပြီး ပျက်စီးနေတဲ့သွေးကြောနေရာကို သိမယ်၊ အဲဒီနေရာရောက်အောင် stent ထည့်ပြီး ပြုပြင်ပေးမယ်၊ ပြီးရင် stent ကလွဲပြီး ကျန်တာတွေအားလုံးကို ပြန်ထုတ်၊ ခွဲစိတ်ရာကို ပြန်ချုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူကလည်းခွဲစိတ်မှု တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာလေးတွေ ရှိပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေကတော့
သွေးကြောတွေကို ပုံရိပ်ဖော်တဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့ ဆေးရည်တွေနဲ့ ဓာတ်မတည့်တာ
မေ့ဆေးပေးခွဲစိတ်ရတာဖြစ်တာကြောင့် မေ့ဆေးရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးတွေ
သွေးကြောကို ခွဲစိတ်ရာမှာဖြစ်တာကြောင့် သွေးထွက်လွန်တဲ့ ပြဿနာတွေ
Stent က အခြားသွေးကြောတစ်ခုအပေါ် သွားပိမိပြီး သွေးကြောပိတ်သွားနိုင်တာတွေ
အသစ်ဝင်လာတဲ့ stent ကို ခုခံအားက ပြန်တိုက်လို့ သွေးကြောတွေ ရောင်ပြီး ကျဉ်းလာတာမျိုးတွေ
လေပြွန်ထဲ stent ထည့်တဲ့ ကိစ္စတွေမှာဆို အသက်ရှူရခက်တာတွေ
ကျောက်ကပ်ထဲ stent ထည့်တဲ့ပြဿနာတွေမှာဆို ကျောက်တည်တာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
Stent ထည့်ပြီးနောက်ပိုင်း ဘာတွေဆက်ဖြစ်နိုင်သေးလဲ။
ခွဲထားတဲ့ အရာလေးကနေ နာကျင်မှု အနည်းငယ်ခံစားရမယ်။ အဲဒီအတွက် ဆရာဝန်တွေက ဆေးပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သွေးခဲတာမျိုးတွေ မဖြစ်အောင်လို့ သွေးကျဲဆေးတွေလည်း သောက်ရပါလိမ့်မယ်။
နှလုံးသွေးကြောပိတ်တာ လေဖြတ်တာမျိုးတွေ ကြောင့် stent ထည့်ရရင်တော့ စိတ်ချရအောင် ဆေးရုံမှာ ရက်အနည်းငယ်နေဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
နောက်ပြီး သွေးကြောကျဉ်းတာ သွေးတွင်းအဆီများတာမျိုးတွေ ထပ်မဖြစ်အောင်လ်ို့ ကိုယ့်ရဲ့ နေထိုင်စားသောက်မှု ပုံစံတွေကို ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် ။ ။
ရေးသားသူ Dr. Thin Yadanar @ Frances ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Thurein Hlaing Win ဤဆောငျးပါးကို DVB ၏ မိတျဘကျ ကနျြးမာရေးနှငျ့ ဆေးပညာဝကျဘျဆိုဒျ hellosayarwon.com မှ ကူးယူဖျောပွပါသညျ။